सिल्टल: साइबर क्रिमेसनहरूले कसरी अनलाइन स्क्यामहरू ट्रिगर गर्न सक्छन्?
इन्टरनेटले सबैलाई अनौठो अवसर खोलेको छ। यो सरल छ। यो छसुविधाजनक। यो उत्कृष्ट छ। तपाईं पसल गर्न सक्नुहुन्छ, बिलहरू तिर्नुहोस्, चलचित्रहरू हेर्नुहोस्, समाचारहरू प्राप्त गर्नुहोस्, रिजर्भेसनहरू बनाउनुहोस्, हल्लामा काम प्लस यति धेरै। ग्लोबलको रूपमाजनसंख्याको आंक्रा इन्टरनेट प्रयोग गर्न नयाँ तरिकाहरू छन्, साइबर अपराधीहरू टावरमा छन् तर निर्माण भन्दा सट्टा, तिनीहरूले घोटाला, सुत्न र चोरी गर्न खोज्छन्। त्यसकारण,तपाईं कसरी अनलाइन धोखाधडीहरूबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ?
राम्रो छ, जवाफ सरल छ: म्याक्स बेल द्वारा निर्दिष्ट सामान्य अनलाइन घोटालासँग परिचित हुनुहोस्,ग्राहक सफलता व्यवस्थापक सेमील्ट ,र तपाईं पीडित हुनुहुन्न।
फिशिंग इमेल घोटाला
यस वर्ष (2017), फिशिंग इमेल पठाइएको संख्या योभन्दा बढी 155% थियोगत वर्ष। एक फिसिङ स्क्याम सामाजिक सञ्जाल नेटवर्क मार्फत वा इमेल मार्फत सञ्चारमा आधारित छ। यहाँ, सतावटकर्ता प्रयास गर्दछतपाईंको क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक विवरणहरू, लगइन वा कुनै अन्य व्यक्तिगत डेटा विभाजन गर्न राजी गर्न। तपाईंलाई एक क्लिक गर्न पदोन्नति गर्न सकिन्छलिङ्क। यो तपाइँको प्रणालीमा डेटा चोरी लगाउने माल फैलाउने तरिका हो। राम्रो र अपडेट गरिएको एंटीवायरस कार्यक्रमको साथ, तपाईं सक्षम हुनु पर्छयो घोटाला राख्नुहोस्।
नाइजीरिया 419घोटाला
यो घोटाले सामान्य रूपमा हृदय-रिंच गर्ने ईमेल, पाठ सन्देश, पत्र वा समावेश गर्दछसमेत एक सामाजिक मीडिया खाता सन्देश संकटमा एक महिला द्वारा पठाएको छ। उनले दावी गरे कि उनी एक धनी हिरोइन, व्यवसायी महिला या सरकारी अधिकारी हुन्तपाईले पैसा कमाउन सहयोग पुर्याउन जसको पछि तपाईंले लम्प योग प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँ क्याप्चर हो: तपाईले केही शुल्क तिर्न मद्दत गर्दछ त्यसपछि तपाई फर्कनु हुन्छएक ठूलो साझेदारी
यस योजनामा, तपाईंले साथीबाट 'हानिकारक' नमस्कार कार्ड पाउनुहुन्छ। यद्यपि, एलिङ्कमा यदि क्लिक गरिएको हो भने मालवेयरले ग्रीभ्रेसन कार्डमा राखिएको छ। मैलवेयर एक अपरिचित कार्यक्रमबाट केहि हुन सक्छजसले वेब ब्राउजरमा पप-अप विज्ञापनहरू वा अनपेक्षित विन्डोजहरू सुरू गर्दछ। सबै भन्दा खराब अवस्थामा परिस्थितिमा, यो ransomware हुन सक्छ - सबैको दु: खी।
कहिलेकाहीं कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ मानिसहरु आर्थिक सहायता पाउन विभिन्न रणनीतिहरु लाई सहज गर्छन।यद्यपि, तपाइँ एक प्रस्ताव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जो सत्य हुन राम्रो छ। यो उदाहरण लिनुहोस्: तपाई घरको बाटोमा एक ट्याबको पछाडीमा बस्नुभयो र तपाईएउटा सन्देश प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईले कम चासोको साथ पूर्व-अनुमोदित ऋण पाउनुभयो। Source - pungiball per bambini gonfiabili.यस घोटालाको लागि खण्ड नगर्नुहोस्। सामान्य अर्थ प्रयोग गर्नुहोस्।
भवदीय, सबैभन्दा पुरानो अनलाइन घोटाला। यो इमेल मार्फत आउछ। सन्देश सरल छ:तपाईंले लटरी वा धैर्य स्वेच्छेक्सहरूमा नगद पुरस्कार जित्नुभयो, तर तपाईं आफ्नो पैसा दावी गर्न को लागी, तपाईंलाई प्रशोधन शुल्क वा केहि तिर्नुपर्छत्यो लाइनमा। तपाईं विजेताहरूको संख्या जसले वास्तवमा सहभागी बिना जितेको छ भन्ने छमाउन्ट गर्नुहुनेछ।
यो निर्धक्क विच्छेद हो। यदि तपाईंले तिर्नुभएको छैन भने अपराधकर्मीले तपाईंलाई मार्छ भन्ने धम्की दिन्छ।तिनीहरू भन्थे कि उनीहरूलाई पहिलो स्थानमा मार्न को लागी काम गरिसकेका थिए, तर तिनीहरू (हिट) ले यसो भनिरहनुभएको छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई छोड्न तिर्नु भएको छशान्तमा। डरावना के हो यो तथ्य यो हो कि उनि आफ्नो जीवन गतिविधिहरु को पुनरावलोकन गर्न सक्छन्।
यो डेटिङ वेबसाइटहरू लक्ष्य गर्दछ। यो योजना परिशुद्धताको साथ महिना को लागी निष्पादित गर्न सकिन्छछल सम्भावित पार्टनरले तपाईंलाई उपहार प्रदान गरेर तपाईंको भरोसालाई सुस्त तुल्याउँछ। त्यसपछि एक दिन, तिनीहरू आकस्मिक हुने गर्छन्। प्रायः सापेक्षबिरामी हुनुपर्दछ वा तिनीहरूको व्यवसाय नगदको कमीको लागि ठिक छ। त्यसपछि तपाईलाई फिर्ता पठाइने रकम पठाउन सोधिएको छ।
यहाँ तपाईंले समाचार प्राप्त गर्नुहुने छ कि तपाईंले गद्दाई पुनर्मिलनको साथ एक आकर्षक नौकरी पार्यो। त्यहाँयद्यपि एक पकड हो। काम सुरक्षित गर्न, तपाईंले केहि शुल्क तिर्न आवश्यक छ।
छुट्टै छुट्टै बिदाहरू जस्तै गर्मीमा वा क्रिसमसमा। यहाँ तपाइँलाई राम्रो प्रतिज्ञा गरिएको छयात्रा प्याकेज एक सस्तो सस्तोमा। शिकार हुनदेखि बच्नको लागि, वेबसाइटको समीक्षा जाँच गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई पैसा बचत गर्न सक्छ।
नकली खरीदारी वेबसाइट स्क्याम - प्रतिमा विश्वव्यापी ब्रान्डहरू र नक्कल नगरी प्राइवेसीअनलाइन विक्रेताहरु लाई नयाँ सामान किन्न को लागी।
नकली समाचार घोटाला - स्व-व्याख्या।
नकली एंटीवायरस प्रोग्राम घोटाले।